မဂ်နှင့် သောတာပန် | မေတ္တာရိပ်
တစ်ရာ နှင့် တစ်ရက် →
မဂ်နှင့် သောတာပန်	Posted on May 13, 2010	by mettayate “မဂ်” ၏ အဓိပ္ပါယ်
အညွန်း – အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်- ရွှေပြည်သာ) ရေးသားသော မဂ်တားဖိုလ်တားအန္တရာယ်များ စာအုပ်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ. Bookmark the permalink.	← သောတာပန်